कुन विषय पढ्ने विद्यार्थीहरुले धेरै सेक्स गर्छन् ? |
स्वास्थ्य / शैली शुक्रबार, १८ चैत, २०७३
कुन विषय पढ्ने विद्यार्थीहरुले धेरै सेक्स गर्छन् ?
विश्वविद्यालयमा कुन विषय पढ्ने विद्यार्थीहरुले धेरै सेक्स गर्छन् होला त ? कुन विषय पढ्ने विद्यार्थीहरुले थोरै सेक्स गर्छन् ? यो सबै चासोको विषय हुनसक्छ । हालै एउटा अनुसन्धान टोलीले यसबारे निष्कर्ष निकालेको छ ।
केमिकल इन्जिनियरिङ पढ्ने कोही विद्याथी चिन्नुहुन्छ ? उक्त अध्ययनमा केमिकल इन्जिनियरिङ पढ्ने विद्यार्थीहरुले एकदम थोरै सेक्स गर्ने जनाएको छ ।
त्यस्तै सबैभन्दा बढी सेक्स गर्ने लिजर, हस्पिटालिटी, टुरिजम र रिटेल पढ्ने विद्यार्थीहरु रहेका छन् । उत्पादन र तथा इन्जिनियरिङ पढ्ने दोस्रो र मार्केटिङ पढ्ने विद्यार्थीहरु तेस्रो स्थानमा रहेका छन् । ब्रिटेनमा ५८०० जना विद्यार्थीमा गरिएको उक्त अध्ययनले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो ।